QISO XANUUN BADAN: Gabar Soomaaliyeed oo sixir lagu guursaday | Calafka.net	Monday, April 21st, 2014	Home
Dec 10, 2012 - 13 Jawaabood	ShareWaxan halkaan idin soo gud bineynaa qiso dhab ah oo ku dhacaday gabar somaliyeed ahne qiso murugu leh markii ad aqriso maan kaga wax ku reebidoonto .
Ismeehaan waa gabar somaliyeed waxayna ku looleed wadanka UK gaar ahaan London.
Ismeehan maalin maal maha kamid ah ayeey waxay soo aday wadanka Kenya gaar ahaan xafada islii , waxayna aheed gabar alaah u dhaliyay qurux iyo heeybad, asluub. Qofkii arkaa kadaba harimaayo Ismeehan. Waxaa dhacaday in ay kireeysatay hotel marka ay ka soo dagootay airporka jooma kiyaati ee ku yala dalka Kenya.
Durbadiiba waxay aheed qof dalan oo xalay oo dhanbeey diyarad soo saarneed markiiba qolkii ay ka daganeed hotelka ayeey iska sexatay.
Ismeehan cabaar kadib waxay soo aday banaanka waxayna is barteen qaar ka mid ah shaqalihii maqayada si aad oo weyn ayeey isku fahmeen balse waxaa gabadha damac guur uqaday milkilaha maqayada kuna yiri waaaw ma xuural ceeyntii dunidaa mise waa indhahegyga. Ismeehan oo cunta ka cuneysa maqayada. Durbadiiba ismeehan waxa galay xishood waxay aheed gabar aad u afgaban waxayna ku tiri mahada sanid aboowe. Maalintii danbe ayaa ismeehan oo magalada aday oo ku soo dahday ayaa ayada dhag laqabto laheed aadna u dalan ayeey mar qura soo gashay maqayada waxayna fariisatay kuraasta cuntada lagucuno waxana soo garay milkilaha maqayada kuna yiri xural ceyntii duniday makuu kenaa biyo qabow oo aad u macaan.
Markaas beey ku tiri aboowe ii keen mahad sanid in badan walhi waan dalanahaye. Markaas buu in uu orday biyo u keenay Ismeehan waa cabtay biyihii, maxasa ku dhacay, Ismeehan meshii ayeey ku miir daboolantay, oo jirkeeda dhan baa la saqay gaabdhii hada firficooned is badal weyn ayaa galay. Ismeehan gaari ayaa la saray waxana loo geyay nin shiiq ah wuxuuna ku yiri ma rabtaa ninkaan, haaa wan rabaa igu mahari. Maskaxda is Meehan majogin bil xilxaqiiqatan. Ismeehan markii uu maharku dhacay ayaa lakenay qolkii habeenkii waxii dhicikaro ayaa dhacay balse ismeehan miirkiidii wuxuu soo labtay ayada oo sariirta lagula jifo naxdin iyo qeeylo kadib.Ismeehan
Su aalo ayeey weydisay maxawaye sedan nin yahow?
Waan ku qabaa nagteyda ayad tahay oo warqadan baan hestaa cadeyn ii ah . Ok dadkeyga uma shego karo wayo waa ley sixray wax iga yela malaha. Fakir kadib waxan ku soo labtay Dalka UK waxana jogay mudo waxana ka codsaday in uu ifuro balse waa idiiday markii danbe ayuu waxaa uu iga qadatay lacag gaarseeysa 3000 Doloar sidaas ayuu ku furay ismeehan.
Qisadan waa qiso dhab ah dhacaday ha moodin wax qiyaali ah
Fadlan ka dhiibo fakarkaga adiga oo mahadasan
M.deeq says:	December 10, 2012 at 12:13 pm	Aniga waxan la yabanahay qofka shekadan so qoray hadana dhahaya waa qiso dhab ah waayo en qofkay ku dhacday ayaa ben shegaya qof biyo la siyay o sixir ku jira o dhacay aya la mehersaday wax so conaya ma ahan qofta way cadahay milkilaha qarash ayay ku racday mida kale mar cafimaday o jogtay kanya maxay iskaga furi waysay markay tagtay ukay may maskaxdeeda so labatay aniga waxan aminsanahay wax inay jiran waaba hadi ay jirto qisadan palse dhabta maysan taban ama kama shegin gabadhan iyo kuwa so qoray
Reply »	Cyc says:	December 10, 2012 at 1:22 pm	Waa yabe KKkKk
Reply »	Mohamed ibrahim " m.macruuf " says:	December 10, 2012 at 8:10 pm	Waa stuppid !
Reply »	fodcade says:	December 10, 2012 at 8:15 pm	Asc dhaman asxabta kuxeran calafka marka hore wankaxumahay waxa kudhacay walasheyda markaxigta maxeysodontay iyada oo ana lalasoco nin solama dhihikaro iyada ayaa qaladka iskaleh maxayelay qofdumar ah ookaliged socoto qof waliba aya hunguriyeynayo markaloma bahno in aykaligedsocoto iyada ogabar ah marka waxanleyahay ilahay usoonoqo utobo laimaaw gab dhehena somaliyed weyku halaben qurbaha mana xeshodan intii ilahay ugargaraymoye marka waxanleyahay hadad jogto qorbaha ama ad jogto wadanka hatagin diintena macankabadan walalley insha alah wanamahasantihin
Reply »	yuyu says:	December 12, 2012 at 7:22 pm	qofki u wax kuradiyo sixir ama qurafad ama aamina in wax utarikaro sixir ha ogado in adun iyo Aqiro ku qasaray? waqtiga lajogo wax kubadan sixir ka dumarka alla kacabsada rag iyo dumarka alle halaga cabsado ayaan dhihilahaa ?
Reply »	Warsame says:	January 3, 2013 at 5:49 pm	Agah gabadha kaliged maxaa hotel dajiyay? sidee loo meheriyay haday miyir dabolantay? markase lola cararay shekha ma dabiibidbaa logukenay mise inu meheriya logu kenay? saadshegaysan markay miyirsatay intay wadanka jogtay soma qabin ninku mise wayka carartay? haduna sixirka kadib siiqabin markay UK tagtay siday uga bariday furitaan? warkani mahufana mana sababaysna
Reply »	Nimcanura says:	February 15, 2013 at 3:29 pm	Asc dhaman akhyaarta, marka xigta gabadhan iyada aya dinta garab martay waayo maxram la’an ayey socotay waliba ay hotel sidagtay qurba wey ku halaben da’yarta so maliyed war Illaahay halaga cabsado billaahi caleykum.
Reply »	foos says:	April 30, 2013 at 2:26 pm	aas dhamaan aqyarta ani shekadaan been ayan u arkaa….gabdhaha soomaliyed Ilahy kabaqa oo maxram la an ha soconina ayan leyahay
Reply »	Abukar says:	May 25, 2013 at 1:27 pm	Asc.gabadha maraka horeba gus doon ayey ahayd weyna heshay marka aydheregtay raaxeysatay ayey tiri ifur qaado 3000 dollar sixir haduu ahan lahaa maba mahersan lahen waa gabar hore looga soo tuntay siilked waadhoocil weyn aydhis bay faafisaa ee kafogaada
Reply »	qorqne says:	August 7, 2013 at 8:41 pm	maxaaaaaaaaaaaad kataqaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaa calafka?????????????????????
Reply »	qorqne says:	August 7, 2013 at 8:42 pm	maxaaaaaaad kataqaaaaaaaaaaanaaaaaa clafkaa??????????????????????
Reply »	Boqorka reer sheikh Hassan says:	September 1, 2013 at 9:38 am	Asc marka hore waku mahadsantiin madama aad inow soo gudbiseen qisadaan ku dhacday walasheena mida xigta ani ahaantey waan amini kara sawabtoo ah ninka raga wax walba ayaa ka soortoba hadii uu mar arko kabadha noocaan ah oo aad shegeysan wana ka xumahay arintaan ku dhacday…..
Reply »	muhanad says:	September 12, 2013 at 11:32 am	marka hore waan idnslaamay dhamaan tiiba rga iyo dumar waxan idnkuslaamya slaanta islaamka asmaamucakum sxb hadan uso gudbo sheekadana aan aan meesha ka qaristay sxb waxa soconya maha midkal sxb sida wax loma sheekeyo waan qad sheekadan sxb byyyb